प्रकाश सपुतले आफ्नो वेबसाइटमा शम्भु राईका लागि लेखेको चिट्ठी | latestnepali.com
प्रकाश सपुतले आफ्नो वेबसाइटमा शम्भु राईका लागि लेखेको चिट्ठी
प्रकाश सपुतले आफ्नो वेबसाइटमा शम्भु राईका लागि लेखेको चिट्ठी :
अं साच्चि भाका मिलेको प्रंसग । गाउमै हुदा सुनेको भनेर तपाईलाई मख्ख पार्दिन सर । काठमाण्डौ आएर दोहोरी साझमा काम गर्न थाले पछि हजुरका धेरै गितहरु सहकर्मिहरुको आवाजमा सुनियो । आफुलाई रहर लागेर खोजी खोजी ओरिजिनल गित सुनेर डायरिमा गित टिपेर पनि गाईयो । चिठि तिम्लाई र तिमिले सम्झेनी लाखै छ भन्ने अक्सर अफर आउथ्यो दोहोरीमा सहकर्मिले गाउथे म अभिनय जस्तो गर्थे । हल्का रक्सिले मातेको बेला यस्तो गितले अझै छुने रैछ कि मान्छेलाई कुन्नि ? पैसा पनि राम्रै झर्थ्यो । म चाहि रहरले चलेछ बतास सुस्तरी गाउने प्रयास गर्थे । त्यसको पुरै अन्तरा याद छ सर मलाई । कतै माहोल जुरेछ भने म हजुरलाई सुनाम्ला गाएरै । तर कुन क़सम खाएर भनौ सर यो देउसी भैलो गित मैले सुनेको थिएन । त्यसैले मैले कपि गरेको हुदै होईन । पहिलेनै रेकर्ड भैसकेको कुनै गित पुन रेकर्ड गर्छु र हिट बनाउछु भन्ने आत्मविश्वास कसैमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन सर । बरु पुरानो हिट गितलाई रिमेक गर्ने, कभर गर्ने चलन बढेको छ । यो कति सहि गलत -त्यता नजाउ मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहि पहिला त्यति नसुनिएको, सफल नभएको गितलाई रि रेकर्ड गरेर चलाईदिन्छु भन्ने कन्फिडेन्स ममा छैन सर । त्यो रिश्क तपाईले त्यति खेरै लिनु भयो । अब मैले किन लिन्थेर ! अहिलेत झन ख़र्च बढेको छ सर । कलाकारको भाउ र पारिश्रमिक ह्वात्तै बढेको छ । खर्च उठाउने विजनेश वे छैन । उसबेला जस्तो क्यासेटमा साईन गरेर पठाएको अनुभव हामीले गर्न पाईएन सर । अहिलेको अबसर र चुनौती भनेको मैल माथी जोडिसके तेई ‘भाईरल ‘ हो । त्यो पनि फिरिको ।
गलबन्दी हिट भएको केहि समय बित्न नपाउदै अन्जलीले खेलेको अर्को गीत भाइरल